Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Imbewu yeSesame ngoku iyakhunjulwa ngenxa yeSalmonella
I-Pantry yeNdalo ikhumbula imbewu yesesame ye-Org evela kwindawo yentengiso ngenxa yokungcoliseka okunokwenzeka kweSalmonella. Imveliso ebuyisiweyo ithengisiwe njengoko kubonisiwe kwitheyibhile.
• Uphawu: Akukho
• Imveliso: Imbewu yesesame egotyiweyo
• Iinkampani: IPantry yeNdalo
• Umba: Ukutya – ungcoliseko lweMicrobial – Salmonella
• Udidi: Amandongomane, iinkozo, neembewu
• Omawukwenze: Musa ukusebenzisa imveliso ekhutshiweyo
• Abaphulaphuli: Uluntu ngokubanzi
• Ukuhlelwa kweengozi: Udidi lwesi-2
uhlobo imveliso ubungakanani UPC Codes U sasazo
nanye Imbewu yesesame ye-Org Iyaguquguquka -
umabhalane othengisiweyo wakhonza Ukuqala ngo-200516 Zonke iiyunithi ezithengiswa ukusuka
Ngo-Okthobha 8, 2021 ukuya kwi-16 kaNovemba,
2021 ngokudibeneyo Ithengiswa nge
• Ukuba ucinga ukuba uye wagula ngenxa yokusebenzisa imveliso ebuyisiweyo, fowunela ugqirha wakho
• Jonga ukujonga ukuba unayo na imveliso ebuyisiweyo ekhayeni lakho
• Musa ukusebenzisa imveliso ekhutshiweyo
• Iimveliso ezibuyiselweyo kufuneka zilahlwe ngaphandle okanye zibuyiselwe kwindawo ebezithengwe kuyo
Oku kukhunjulwa kuqalwe ziziphumo zovavanyo.
Akukhange kubekho zigulo zichaziweyo ezinxulumene nokusetyenziswa kwale mveliso.
I-Arhente yoHlolo lokuTya yaseKhanada (CFIA) iqhuba uphando lokhuseleko lokutya, olunokukhokelela ekukhunjulweni kwezinye iimveliso. Ukuba ezinye iimveliso ezinobungozi obuphezulu ziyakhunjulwa, i-CFIA iya kwazisa uluntu ngokuhlaziywa kwezilumkiso zokukhumbula ukutya.